Dadka oo Daryeel Xumo Qaniin Qabridahare Ugu Dhimanaya – Rasaasa News
Fadumo Ali and her malnourished son with infectious desease waiting in Kebridahar Hospital
Jijiga, Oct 26, 2014 – Malaaria waa caabuq (infection) dhiiga gala oo ay Kaneecadu u kala qaado dadka qaba caabuqa iyo kuwa aan qabin. Cudurkan waxaa la aqoonsan yahay kumaanaan sano, waxaana jira xili aduunka oo dhan uu ka jiray, in kasta oo haatan laga dabar-gooyey meelo badan oo aduunka ah.
Caabuqa Kaneecada [infection] wuxuu sanad walba qabtaa malaayiin, wuxuuna dilaa hal milyan oo ruux sanad walba.
Magaalada Qabridahre, xarunta gabalka Qoraxey waxaa faro ba,an ku haya caabuqa [malaria] oo ay fidiso Kaniicadu, taas oo sababtay in dad badan ay la jiifaan xanuunkan.
Qabridahare waxay ku taal dhul sare oo cara-cad ah horayna uma lahaan jirin dulinka Kaniicada ee fidiya caabuqa [malaria]. Laakiin dhawrkii sano ee ugu dambeeyey waxaa magaalada si xad dhaaf ah loogu arkayey dulinka Kaniicada, taas oo habeen iyo maalinba dadka cunta.
Dulka Kaniicada oo faro ba,an ku haya dadka wuxuu sababa xanuuno joogta oo aan xili lahayn. Bukaanada ugu badan ee yaal Isbitaalka Qabridahare waxay u jiifaan xanuunka duumada oo qaarkood cagaarshow noqday. Waxaa kale oo guryaha jiif dad badan oo aan Isbitaalka iman, kuwaas oo isticmaala daawo dhaqameed [Dacar-bixin] aan caawin karin.
Caabuqa ay Kaniicadu keento hadaan si wanaagsan loo dawaynin wuxuu horseedaa xanuuno adag oo ay dawayntoodu adagtahay sida xanuunka cagaarshowga [Hepatitis].
Isbitaalka magaalada Qabridahare ayaa siiya bukaanada hawlo caafimaad oo kooban, iyada oo ay ugu wacan tahay in ayna jirin xirfadleyaal caafimaad, qalb iyo dawooyinka ay u baahan yihiin bukaanadu.
Dadka magaaladu waxay aaminsan yihiin Quraafaad ah in Kaniicada laga soo baabay magaalada Godey oo uu dhaxmaro wabiga Shabeele, warkaas oo ku tidhi ku teen ah.
Kaniicada ku badan Qabridahare waxaa sabab u ah biyo la,aan ka jirta magaalada, taas oo kaliftay in ay dadku isku tashadaan oo ay samaystaan Barkado kayd biyood ah. Waxaa kale oo ay magaaladu leedahay cimilo heerkulkeedu u dhaxeeyo 27-34°C [Celsius], taas oo caawisa dhalashada Kaniicada xad-dhaafka ah ee keenaysa xanuunka duumada.
Inkasta oo maamulka hada jiraa uu sheego in uu sameeyey horumar badan, hadana arintani waxay cadaynaysaa in aan baahida shacabka waxba cidi ka qaban.
Baahidani kuma koobna Qabridahre laakiin waxay ka jirtaa dhamaan magaalooyinka iyo meel walba oo ah degaanka Soomaalida ka mid ah.
Daryeelka ugu yar, uguna fudud ee ay Atoobiya siin karto shacabka magaalada waa buufin bishiiba mar laga sameeyo magaalada, taas oo yarayn karta caabuqa ay keento Kaniicadu.
Magaalada Qabridahre waxaa biyo galin ugu horaysay uguna dambaysay sanadkii 1977/8, xiligaas oo ay magaaldu gacanta u gashay Soomaaliya.
Oct 23, 2014 Rasaas
Oct 17, 2014 Rasaas
Jan 22, 2014 Rasaas